MySQL - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၃ မေ ၁၉၉၅; ၂၆ နှစ် အကြာက (၁၉၉၅-၀၅-23)
5.7.13 / ၂ ဇွန် ၂၀၁၆; ၅ နှစ် အကြာက (၂၀၁၆-၀၆-02)
Windows, Linux, Solaris, OS X, FreeBSD
GPL (version 2) or proprietary
MySQL ဟာ multithreaded , Multi-user SQL Database management system (DBMS) တစ်ခုဖြစ်ပြီး MYSQL AB က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူ့အခြေခံ program ဟာ server ပေါ်မှာ run ပြီး multi-user များက database များစွာကို access လုပ်နိုင်သည်။
JBoss model သည် ထိုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပြီး MYSQL ဟာ Swedish company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MYSQL AB အထောက်အပံ့နှင့် ရပ်တည်နေခြင်းဖြစ်ပြီး MYSQL AB သည် codebase တော်တော်များများ၏ copyright များကို ချုပ်ကိုင်ထားသည့် အဖွဲ့လည်းဖြစ်သည်။ MYSQL project သည် source code ရရှိနိုင်ပြီး GNU General Public License အောက်တွင်ထားရှိသည်။
၃ Documentation and Administration
MySQL ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ် မေလ (၂၃) ရက်မှာ ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ Windows Version ကိုတော့ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၈)ရက် နေ့မှာမှ Windows 95 နဲ့ Windows NT အတွက် ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ June 2000 မှာ Version 3.23 : beta ထွက်ပြီးတော့၊ ၎င်းကို January 2001 မှာ အပြီးသတ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ August 2002 မှာ Version 4.0 : beta ထွက်ပြီးတော့၊ ၎င်းကို March 2003 မှာ အပြီးသတ် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် (စုပေါင်း) June 2004 မှာ Version 4.1 : beta ထွက်ပြီးတော့၊ ၎င်းကို October 2004 မှာ အပြီးသတတ် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ March 2005 မှာ Version 5.0 : beta ထွက်ခဲ့ပြီးတော့၊ ၎င်းကို October 2005 မှာ အပြီးသတ် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ November 2005 ကတည်းက Version 5.1 ကို စမ်းသပ်နေဆဲဖြစ် ပါတယ်။
MySQL က Web Applications အတွက် popular ဖြစ်ပါတယ်။ သူက PHP, Ruby on Rails တို့နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုရာမှာ ပိုပြီး Popular ဖြစ်ပါတယ်။ Joomla!, WordPress နဲ့ Drupal တို့လိုသော Content Management Systems တွေအတွက်တော့ PHP နဲ့ MySQL ဟာ မရှိမဖြစ်ပါ။ အခု ကျွန်တော့်ရဲ့ www.7-kmk.com ကိုလည်း Joomla! သုံးထားတဲ့အတွက် PHP နဲ့ MySQL ပါပဲ။ တခြားတွဲဖတ်အသုံးပြုနိုင်သော Program တွေကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Delphi, C, C++, Java, Perl, PHP, PureBasic, Python, Ruby, Smalltalk,.NET.
Documentation and Administration[ပြင်ဆင်ရန်]
MySQL ကိုအသုံးပြုမှုနဲ့ သူ့ရဲ့ သတင်းတွေကို MySQL's company website ဖြစ်တဲ့ http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/index.html မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ MySQL အကြောင်း စာအုပ်တွေလည်း အများအပြားရှိပါတယ်။
MySQL databases ကို adminstraion လုပ်ဖို့ရာမှာ command-line ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ GUI အနေနဲ့လည်း administration လုပ်နိုင်ပြီး ၎င်း GUI tool ကို download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ MySQL Administrator နဲ့ MySQL Query Browser တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ GUI tool နှစ်ခုစလုံးကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ MySQL GUI Tools ကိုလည်း ရနေနိုင်ပါပြီ။
အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ tools တွေဟာ MySQL AB ကနေမှ develop လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီးတော့ နောက်ထပ်အနေနဲ့ tools တွေ အများအပြားရှိနေပါသေးတယ်။ popular ဖြစ်တာကတော့ PHP MyAdmin ပါ။ webbased interface နဲ့ administration လုပ်နိုင်တဲ့ free tools တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
MySQL ဟာ platforms အမျိုးမျိုးပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ Platforms တွေကတော့ AIX, BSDI, FreeBSD, HP-UX, i5/OS, Linux, Mac OS X, NetBSD, Novell NetWare, OpenBSD, OS/2 Warp, QNX, SGI IRIX, Solaris, SunOS, SCO OpenServer, SCO UnixWare, Tru64, Windows 95, Windows 98, Window ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP and Windows Vista,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 တို့ဖြစ်ပါတယ်။
↑ MySQL 5.7 Release Notes။ mysql.com။2June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ MySQL: Project Summary။ Ohloh။ Black Duck Software။ 17 September 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Supported Platforms: MySQL Database။ Oracle။ 24 March 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Downloads။ MySQL။ 2014-08-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=MySQL&oldid=719023" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။